ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တဆယ်အလုပ်အကိုင်များ - လက်ရာများနှင့်အကောင်းဆုံးလက်လီရောင်းချမှုအလုပ်အကိုင်များ | USAHello | USAHello
လက်လီအရောင်းသည်လူများထံသို့တိုက်ရိုက်အမှုအရာရောင်း, ဆိုလိုတာကပါဝင်သည်. လက်လီအရောင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူသန်းပေါင်းများစွာ. အဲဒီမှာလက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအဘို့ကြီးစွာသောဝယ်လိုအားအမြဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီအလုပ်အကိုင်များကိုအမြဲကောင်းစွာ-paid ကြသည်မဟုတ်.
အရောင်းလည်းထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်အဖြစ်ရောင်းချသူ၏ထုတ်လုပ်သူမှအရာရောင်းအားများပါဝင်ပါသည်. ဒါဟာအစတွေဖြစ်တဲ့ဆေးရုံအဖြစ်အကြီးအအသုံးပြုသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာအစထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာနှင့်အာမခံအဖြစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချရန်လည်းပါဝင်သည်.
လူတွေသင်၏အသက်တာတွင်အခြားအမှုအရာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အဘို့ဖုန်းကို function ကိုမှတဆင့် Ooualembaat လက်လီရောင်းချမှုအတွက်အရောင်းဂျော့ဘ်သည်ကောင်း. ဖုန်းနံပါတ်ရောင်းအားအလုပ်သငျသညျအိမျမှာခွင့်ပြုနှင့်ဆိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလက်လီအလုပ်သင်ခွင့်ပြု.
သင်အေဂျင်စီ / အဖွဲ့အစည်းကပြန်လည်နေရာချထားရေးစင်တာအလုပ်အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အင်္ဂလိပ်အတန်းနှင့်အတူပေးသွားမှာပါ. အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင် Center ကရှာဖွေပါ.
တိုင်းအခမဲ့မွို့၌အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများ. အကွံဉာဏျပေးနှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကအလုပ်၏ CVs နှင့်ပုံစံများကိုကူညီပေးနေကြပါသည်. ဒါဟာအလုပ်အကိုင်နှင့်ပညာရေးအပေါ်သင်တန်းသင်၏ပြေစာ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ. အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင် Center ကရှာဖွေပါ .
Salesjobs.com ဒါဟာရောင်းအားအလုပ်အကိုင်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုအထူးပြုအလုပ်တစ်ခု site ကိုဖြစ်ပါတယ်
အလုပ်ရှာဖွေရေးလက်လီအလုပ်ရှာဖွေရေး Onestop အရောင်းကိုယ်စားလှယ်